Quinazolines-APICMO CDMO Vaiti
Quinazoline ishizha rinokonzerwa ne formula C8H6N2. Iyo heterocycle inonhuhwirira ine bicyclic yakagadzirwa nemaviri akabatanidza zvindori zvitanhatu zvinonhuwira, bheni yeBenene uye pirimididine ring. Icho chiedza chine kristalline yakasimba iyo inosunungura mumvura. Iyo inozivikanwawo se1,3-diazanaphthalene, quinazoline yakagamuchira zita rayo kubva pakuva aza derived ye quinoline. Kunyange zvazvo mubereki quinazoline molecule isingatauri zvayo pachayo mumabhuku ezvinyorwa, zvigadziriswa zvinotsiviwa zvakashandiswa pakurapa zvakadai sehutachiona uye anticancer agents,
Aapproved afatinib, chirwere chakagadzirwa naBoehringer Ingelheim.
Erlotinib, chirwere chakagadzirwa naAlexellas, kurapa varwere veNSCLC vane matumire anokonzerwa nekuchinja kweEGFR.
GlaxoSmithKline's drug lapatinib yaibata chirwere chepamusoro-soro kana chetachiona chemasamende pamwe chete neRoche's capecitabine.
Kuratidza zvose 8 zvawanikwa